I-Chalet de La Chaumière - I-Airbnb
I-Chalet de La Chaumière
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNoëmie
Indlu esemaphandleni etofotofo nenempawu zokwenyani ezibonisa kakuhle uMlambo iSt-Lawrence kunye neetshona zelanga ezintle. Igumbi lokulala linefenitshala elala abantu ababini ibe kukho nesofa ekwayibhedi kwigumbi lokuhlala. Kukho umnyango weveranda okhokelela kwintente enkulu yabucala ejongene namanzi. Umalunga neekhilomitha eziyi-5 ukusuka kwiilali zaseSaint-Jean-Port-Joli apho uza kufumana zonke izinto eziyimfuneko...(ivenkile yokutya, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, ikofu kunye nezinto ezinomtsalane kubakhenkethi) njl... I-CITQ Iqinisekisiwe
Le ndlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga ikunika ithuba lokuba wedwa uze uphile ngokutsho kwamaza. Zonke izinto ezinokusetyenziswa zikhona, kodwa zihonjiswe ngendlela yakudala neqaqambileyo. Kwisikhephe esiphezulu, ukuqubha kunokwenzeka, kunye nezikhephe ezincinci kwabo banalo. Isandi samaza, umoya omnene womlambo, ukuzola kwendalo kunye neentaka kuya kuba ngumthombo wokuphilisa kakuhle!!
ISt-Jean-Port-Joli yilali yabakhenkethi eneendawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile. Kukho iroaster, i-micro brewery, indawo yokubhaka, ivenkile yepastry ..... Idama lokuqubha kunye neendlela zokuhamba yi-1 KM ukusuka kwindlu kunye ne-Trois-Saumons Golf Course. Iipaki, ubugcisa, inkcubeko, iimarina, iivenkile, iigalari ... Amathuba amaninzi eepikure, abathandi bomlambo!
Umbuki zindwendwe ngu- Noëmie
Ndiyakuvuyela kakhulu ukukhetha ukunxibelelana nam ukuba bayayidinga. Ndithanda ukunika abantu ubumfihlo kunye nethuba lokuphumla kancinci. Nangona kunjalo, ndihlala ndifumaneka imini nobusuku ukuba unemibuzo, iingxaki endinokuzilungisa okanye ndicebise ezona ndawo zifanelekileyo zasekuhlaleni kwabo bafuna ukuyibuka.
Ndiyakuvuyela kakhulu ukukhetha ukunxibelelana nam ukuba bayayidinga. Ndithanda ukunika abantu ubumfihlo kunye nethuba lokuphumla kancinci. Nangona kunjalo, ndihlala ndifumaneka im…
Inombolo yomthetho: 305705
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Jean-Port-Joli